Tag: gudaha aragtida apis | Martech Zone
Tag: aragtida gudaha
Arbacada, Agoosto 2, 2017 Talaado, Agoosto 1, 2017 Joe Andrews
Cadaadiska saaran CMOs si dhakhso leh ayuu usii kordhayaa maaddaama la siiyay masuuliyad toos ah oo toos ah oo ku saabsan koritaanka dakhliga, oo ay ku jiraan miisaaniyad dheeri ah iyo agabyada nidaamyada si ay u dhacdo. "Wanaagsan," waxaad dhahdaa! Ugu dambeyntii xoogaa ixtiraam u ah suuqleyda. Laakiin caqabadda hadda waxaa lagula xisaabtamayaa bixinta natiijooyinka la qiyaasi karo - iyo dhakhso. Caqabada weyn ee hortaagan guusha ayaa ah kooxaha suuq geynta oo aan laheyn awoodo muhiim ah oo loo baahan yahay si loo cabbiro saameynta ay ku leeyihiin kororka dakhliga ururka (tusaale macluumaadka la wado